Taratasim-baovao RV: Nampandroso vondro-tanora vaovao indizeny avy amin’ny vondrom-piarahamonina media ny Cultural Survival · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2020 4:54 GMT
Ireo tanora indizeny avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fampitam-baovao nahazo vatsim-pianarana 2020, sary natolotry ny Cultural Survival ary nahazoana alalana.
Naoty Rising Voices : Manolotra famintinana ireo bilaogin-dahatsoratray vao haingana momba ny lafiny rehetra amin'ny fampiatiana nomerika ny taratasim-baovaonay izay mivoaka isaky ny roa herinandro, anisan'izany ny fidirana sy ny fampiasana ireo fitaovana nomerika ary ny fomba sy ny hirika samihafa ho an'ny vondrom-piarahamonina mba handraisan'izy ireo anjara feno amin'ny Aterineto. Vakio ato raha hamaky ireo lahatsoratra teo aloha ho an'ity vaovao ity.
Taona fahatelo, nanohy ny fanohanany ny tanora indizeny amin'ny fisoloan-tena ny feon'ireo vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny alàlan'ny vatsim-pianarana ho an'ny tanora indizeny avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fampitam-baovao ny Cultural Survival. Nambara tamin'ny fiandohan'ny volana lasa teo ny andiany 2020 tamin'ireo nahazo vatsim-pianarana!
Tanora mpitarika indizeny, 16 ka hatramin'ny 26 taona, avy any Ekoadaoro, Nepal, Kolombia, Meksika, Pero ary Shily ry zareo. Azonao atao ny mitopy maso ny momba azy ireo sy ny momba ny tetikasan'izy ireo tsirairay manokana ato [en].
Raha araka ny hevitrao, ho tahaka ny ahoana ny “Taranaka Manaraka amin'ny Aterineto”? Manaiky ny idealin'ny Aterineto Misokatra azo itokisana izay hanajana ny fiainantsika manokana ve ianao? Miangavy anao mba hisoratra anarana ao amin'ny NGI Zero PET Fund sy ny Discovery Fund, raha heverinao fa mety hanampy amin'ny fanatanterahana izany idealy izany ny hevitrao. Fisoratana anarana farany: 1 Febroary 2020 amin'ny mitataovovonana (CET)
Mpandray anjara amin'ny fampielezam-baovao ao amin'ny vondrom-piarahamona indizeny ve ianao ary mitady ny fomba hampiroboroboana maharitra ny onjam-peon'ny vondrom-piarahamonina misy anao? Mety maniry ny hangataka vatsim-pianarana Fampitam-baovaom-Pokonolona Indizeny an'ny Cultural Survival ianao, fandaharam-pianarana handraisana anjara sy mavitrika hanampy anao hanatanterahana izany fikasana izany. Jereo eto raha mila ny antsipiriany momba ny fangatahana sy ny fepetra takiana. Fisoratana anarana farany: 15 Febroary 2020
HIRIKA | VATSIM-PIANARANA
Tanora mpandraharaha ve ianao ary mikasa ny hanomboka ny fiharianao ara-tsosialy manokana ? ” Mila fanampiana kely ihany indraindray ny fanovana an'izao tontolo izao,” hoy ny Yunus&Youth, ekipa ahitana tanora matihanina manerantany izay nanolo-tena hanampy anao amin'ny fikasanao lehibe. Jereo azafady ny zavatra atolotry ny Vatsim-pianarana Yunus&Youth 2020 ary misorata anarana ato. Farany fisoratana anarana: 16 Febroary 2020 amin'ny 11:59 hariva (EST)
Manolotra ny atrikasa Augmented Reality (Zava-misy Nakarina) ho an'ireo izay liana momba ny Augmented Reality sy ny fomba ahafahany manampy ny asa famoronan'ny vondrom-piarahamonina teratany ny IM4 Media Lab. Manasa ny mpandray anjara indizeny izy ireo hanatrika izany maimaim-poana. Azafady misoratra anarana eto raha mahaliana anao izany. Daty: 1 Febroary, 2020 / Toerana: Vancouver, BC, Canada
Tao anatin'ny ezaka fiaraha-miasa hampiroboroboana ny fianarana fahaizana torohay sy fampitam-baovao dia niara-niasa tamin'ny famolavolana ny torolàlana mitondra ny lohateny hoe ” Mampianatra sy Mianatra amin'ny Twitter ” (PDF) ny @TwitterForGood sy ny @UNESCO. Manantena izahay fa ilain'ny mpamaky anay izany!
Tamin'ny volana Oktobra, namoaka ny tatitr'izy ireo ny Tatitry ny Fahamoram-bidy 2019 ( PDF) ny fikambanana ho an'ny Aterineto mora na Alliance for Affordable Internet (A4AI) izay nahita fa sakana lehibe amin'ny fidirana mora amin'ny aterineto ny “tsy fisian'ny fifaninanana”. Tao anatin'io tatitra io ihany koa no nizaran'ny A4AI hevitra ny fomba mety hihetsehan'ny governemanta mba hanampiana hisian'ny fifandraisana manan-danja sy mora ho an'ny rehetra. Amin'ny fanolorana avy amin'ny webinar, azafady jereo ato.
Mampiasa Bluetooth ny sehatry ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra mba hanomezana vaovao ho an'ny tananakely tsy mahazo fampitam-baovao any India amin'ny alàlan'ny IJNet
Songadina MozFest 2019 ao amin'ny Mozilla
Misaotra an'i Eddie Avila tamin'ny fandraisana anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.